रम - को रस देखि बनाइएको पेय उखु यसको किण्वन र आसवन द्वारा, यो छ मजबूत मादक पेय, सबै दुनिया भर लोकप्रिय छ जो। यो एक आनंद से तीतो स्वाद छ र "weightlessness" को एक भावना दिने energize र न्यानो गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ यो उत्पादन ती देशहरूमा, यो सानो रकम यसको शुद्ध रूप मा रक्सी प्रयोग गर्न स्वीकृत भएको छ। हामी अघि छन् रम पिउने, यो अन्य सामाग्री संग मिश्रित र ककटेल को रूप मा प्रयोग गरिन्छ।
मिति, त्यहाँ जो आफ्नो उत्पादन साइटमा निर्भर रम धेरै प्रजातिहरू छन्।
सेतो रम - एक नम्र मीठो स्वाद, त्यसैले यसलाई ककटेल लागि आधार रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको शुद्ध रूप वा पेय र पतला, कागती रस वा कोला संग उदाहरणका लागि मा।
गाढा रम - एक मजबूत स्वाद, यो ककटेल र खाना थपिएको छ छ। यसको विभिन्न विदेशी फल राम्रो खाजा, दालचिनी संग स्वादिष्ट। अँध्यारो विचार रम, पिउन केही संग यो, यो एक सिगार लागि कफी संग एकदम अक्सर पिउने उल्लेख गर्नुपर्छ, र यो विभिन्न पंच र grog बनाउन प्रयोग गरिन्छ।
सुनको रम - एक कर्मेल स्वाद एक मसला र कर्मेल को वाहेक कारण छ। यो एक घटक रूपमा प्रयोग गरिन्छ Daiquiri ककटेल र Pina Colada। साथै, यो मीठो पेय पानी संग पतला र खाने मा रक्सी को सट्टा प्रयोग गरिन्छ।
रम बलियो -, एक ठूलो गढ भएको रक्सी सामग्री 75% पुग्यो।
रम स्वाद - एक फल additives विशिष्ट स्वाद र सुगन्ध सिर्जना गर्न।
को रोम को प्रयोगको लागि केही नियम को किसिमहरु पर्याप्त रकम यो छैन भन्ने तथ्यलाई बावजुद। तपाईं मात्र रम कसरी पिउन सन्दर्भमा केही सुझाव पालना गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, यस पेय राम्ररी Tulip आकार छ जो पातलो स्टेम मा एक गिलास देखि पिउन छ मादक पेय को आफ्नो स्लाइस केंद्रित सुगन्ध देखि (यो एक तेस्रो गर्न भरिएको छ)। एकै समयमा यो सानो sips मा पिएको, बरफ वा कागति थप नगरी, तिनीहरूले स्वाद अवशोषित र स्वाद विकृत रूपमा छ।
बरु महंगा रम ककटेल यो शुद्ध फारम प्रयोग गरिएको छ भुईँकटर वा सुन्तला वा निचोडा रस वा पानी खाने, थप छन्। विशेष गरी स्वादिष्ट यदि तपाईं आफ्नो हट चकलेट मा थप्न, यो मादक पेय पाए।
रम पिउने अघि, तपाईं पेय न्यानो गर्न थाक हातमा लिन केही मिनेट आवश्यक छ। त्यसपछि ऊ शरीर मा भित्र पस्नु गर्न सक्षम थियो कि अरोमा, बिस्तारै आफ्नो साँस रमाइलो गर्न, र त्यसपछि मात्र नै समय गन्ध, एक सास को एक ढेर बनाउन, आफ्नो मुखबाट केही सेकेन्ड पकड र त्यसपछि निल्छ आवश्यक छ। कि रक्सी पूर्णतया यसको गुणहरू आनन्द उठाउन सक्छौं त खाने। जसले पहिलो यो पेय पिउन व्यक्ति यो माथिको नियम सबै एक थान मात्र राम्रो गुणस्तर पिउन पर्छ भनेर मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र यो यसको सबै लाभ प्रकट हुनेछ, किनभने तपाईं आदर उहाँलाई उपचार, रम रमाइलो गर्न आवश्यक छ किनभने हतार छैन।
मा उत्तर र दक्षिण अमेरिका एक रम र साइडर, सोडा वा गुड प्रयोग गर्ने निर्णय गरे, तर युरोप मा कागति को रस, पतला छ liqueur, नरिवल दूध र कागति पानी सहित कुनै पनि गैर-रक्सी पिउने पेय। यो अक्सर प्रकाश मासु संग संयोजन मा सेवा छ।
यसरी, रम पिउन जो केही तरिकाहरू छन्। यो सबै व्यक्तिगत प्राथमिकता मा निर्भर गर्दछ। मुख्य कुरा मात्र यस मामला मा छ - उपाय, कहिलेकाहीं 72% सम्म पुगन (यसको विविधता केही), यो पेय रक्सी को एक उच्च प्रतिशत छ किनभने जान्न। यो यसकारण आफ्नो सत्तरी-पाँच ग्राम को कुनै अधिक तीन सर्विंग्स प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ। कुनै पनि मामला मा, यो बलियो मादक पेय यसको प्रयोगको लागि केही सिफारिसहरू पालन गर्न महत्त्वपूर्ण सबैलाई कदर हुनेछ।
घरमा currants देखि रक्सी खाना पकाउने: एक नुस्खा
ICQ के हो? कसरी Windows वा Android को लागि ICQ स्थापना गर्न
घर केक खाना पकाउने!
इभर्स Beskostny डेनिश Vikings, रङ्ख्या लोडरबेक को छोरा को नेता हो। जीवनी, इतिहास